कसरी प्रयोग भइरहेको छ भिएआर ? - विवेचना
कसरी प्रयोग भइरहेको छ भिएआर ?
June 26, 2018 1,683 Views
खेलका क्रममा कुनै विवाद नआओस् भनेर यसपटक रसिया विश्वकपमा भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ (भार) को प्रयोग गरिएको छ । रसिया विश्वकपमा यो प्रविधि कसरी प्रयोग भइरहेको छ । यसबाट खेलको नतिजामा कस्तो असर पर्छ ? यस लेखमा यसबारेको जानकारी समेटिएको छ ।
भिएआर के हो ?
फुटबलमा सही निर्णयसम्म पुग्नका लागि भिडियो प्रविधिको प्रयोग गरिनुलाई नै भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ (भिएआर) भनिन्छ । यो प्रविधिको परीक्षण एफए कप र काराबाओ कपका सिजनहरु र जर्मन र इटालीयन लिगहरुमा गरिएको थियो । निर्णय सच्याउन र पारदर्शी बनाउन यो प्रणालीको प्रयोग विश्वकपका समूह चरणहरुमा भइसकेको छ । पोर्चुगलविरुद्ध डिएगो कोस्टाको पहिलो गोल, अष्ट्रेलियाविरुद्ध फन्सको पेनाल्टी र दक्षिण कोरियाविरुद्ध स्वीडेनको पेनाल्टीको निर्णय भिएआरको प्रयोगबाट गरिएको थियो ।
विश्वकपमा कसरी भइरहेको छ ?
मार्चमा ज्युरिजमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल एसोसिएसनको बोर्ड बैठकले स्थायी रूपमा नै यो प्रणाली लागू गर्ने निर्णयमा मतदान गरेर स्वीकृत गरेपछि २०१८ विश्वकपमा यसको प्रयोग भइरहेको छ । विश्वकपमा पहिलोपटक भिडियो रिप्लेको प्रयोग गरिएको हो । यद्यपि, चार वर्षअघि ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा गोललाइन टेक्नोलोजी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइसकेको थियो ।
भिएआरका नियमहरु केके हुन् ?
भिएआरको प्रयोग तबमात्र गरिन्छ जब रेफले चारमध्ये एकमा प्रस्ट गल्ती गरेका हुन्छन् ।
गोल गरेपछिको अफसाइडको निर्णय भएमा भिएआरसँग परामर्श गर्नु सबैभन्दा सामान्य कारण हो । यस्तै, लुगा तान्नु र अन्य नियम उल्लंघन गरेमा पनि गोल गर्ने अवसर पाउन सकिन्छ । स्पष्ट त्रुटिहरूविरुद्धका निर्णय अफ साइडमा लागु हुँदैन । एक खेलाडी कि अनसाइड वा अफसाइड हुन्छन् । यदि खेलाडी केही इन्चबाट अफसाइडमा छ भने त्यो गोललाई मान्यता दिइँदैन ।
पेनाल्टी एक विवादास्पद क्षेत्र हो । यदि रेफले दिएको मुख्य निर्णयमा स्पष्ट त्रुटि भएको खण्डमा भिएआरको प्रयोग गरी पेनाल्टी दिन वा रद्द गर्न सकिन्छ ।
सिधै रातो कार्ड
हिंस्रक आचरण र खतरनाक ट्याकल्सहरूविरुद्ध भिएआरको प्रयोग गरी खेलाडीहरुलाई सिधै रातो कार्डबाट दण्डित गर्न सकिन्छ । जुन दोस्रो पहेँलो कार्डबाट हुन सक्दैन ।
गलत पहिचान सच्चाउने
२०१४ मा आर्सेनलले चेल्सीलाई ६-१ ले पराजित गर्दा रेफले एलेक्स अक्सलेडे चेम्बरलाइनलाई रातो कार्ड देखाउनुको साटो किइरान गिब्सलाई मैदान बाहिर पठाएका थिए । यदि रेफले यसरी गल्ती गरेर खेलाडीलाई मैदान बाहिर पठाएमा भिएआरबाट त्यस्ता निर्णय सच्चाउन सकिनेछ । खेलको प्रवाहमा अवरोध कम गर्नको लागी यी क्षेत्रमा यो प्रणालीको प्रयोग सीमित गरिएको छ ।
भिएआर प्रयोग गर्दा समयको सीमा
कुनै एक घटनाका कारण रोकेको खेल सुरु भइसकेपछि फेरि उक्त घटनाका लागि भिएआरको प्रयोग गर्न पाइँदैन । भिएआरले फिकक, गोल किक, थ्रो इन, कर्नर किकहरु हुन सक्ने घटना थाहा पाउन नसकेमा पुन: भिएआरको प्रयोग गर्न ढिला भइसकेको हुनेछ । गोल प्रहार गर्दा केही असामान्य गतिविधि भएको देखेमा भिएआरको प्रयोगबाट उक्त गोललाई अमान्य घोषित गर्न सकिन्छ ।
यस्तै, सम्भवत: विवादास्पद निर्णयबाट बच्न नयाँ फिफा नियमहरुले रेफहरुलाई भिएआरको सहयोगमा खेलाडीहरुलाई खेलको दौरान छुटेका गतिविधिका लागि हाल्फ टाइममा दण्डित गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।
भिडियो रेफ कहा“ हुन्छन् ?
भिडियो रेफहरु मस्कोको एक अत्याधुनिक प्रविधि जडित कोठामा रहेका हुन्छन् । उक्त कोठामा दर्जनौँ क्यामेरा एनलल हेर्न मिल्ने प्रविधि जडान गरिएको हुन्छ । उनीहरुले खेल भइरहेको मैदानमा रहेका रेफसँग सिधै कुरा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । केही गल्ती भएको खण्डमा रेफलाई उतैबाट सूचित गर्न सकिन्छ ।
भिएआरको प्रयोग कसरी गरिन्छ ?
खेलको समयमा भिएआरको प्रयोग ३ तरिकाले हुनसक्छ । भिडियो रेफले एयरपिसमार्फत मैदानमा रहेका रेफसँग सम्पर्क गर्छन । मैदानमा भएका रेफले आफो हातमाथि उठाई खेल रोकेको संकेत गर्छन् । र, खेलाडीलाई निर्णय रिभ्यु गरेकोबारे जानकारी दिइन्छ । यदि केही गल्ती नभएको भनी सन्तुष्ट भएमा उनले खेल पुन: सुरु गर्न संकेत गर्नेछन् ।
भिएआरले निर्णय गर्दा रेफले आफो हातबाट रेक्टेनगल बनाई टिभी चिन्हको संकेत गर्नेछन् । त्यसपछि भिडियो रेफले घटनाको समीक्षा गर्नेछ र रेफले यदि आफो निर्णय परिवर्तन गर्न चाहेमा दोर्होयाएर त्यस्तै संकेत गर्नेछन् ।
’अनफिल्ड रिभ्यु’ बाट यो वर्षको सुरुवातमा वेम्बलीमा इटालीले पेनाल्टी पाएको थियो । निर्णयका विषयमा स्पष्ट हुन भिडियो रेफले मैदानमा रहेका रेफलाई मैदानसँगै रहने स्क्रिनमा भिडियो रिप्ले हेर्न निर्देशन दिनेछन् । रिप्ले हेरेपछि उनले आफो अन्तिम निर्णय सुनाउनु अघि फेरि ’टिभी सिग्नल’ दिनेछन् ।
निर्णय लिने अधिकार सधँै रेफसँग हुन्छ । रेफले खेललाई बीचैमा रोकेर भिएआरको निर्णय कुरेर बस्न मिल्दैन । खेल जुन कारणले रोकिएको थियो, त्यसलाई मात्र सच्याउन सकिनेछ । रेफले खेल रोक्नकै लागि भने बल तटस्थ स्थानमा हुनुपर्छ ।
फिफाले भिएआरको किन प्रयोग र्गयो ?
फिफा रेफबाट हुने निर्णय प्रक्रियामा सुधार होस् भन्ने चाहन्छ । साथै ती निर्णयहरु निष्पक्ष र पारदर्शी होस भन्ने उसको इच्छा रहेको छ ।
’म फुटबलप्रेमी, खेलाडी र प्रशिक्षकहरुलाई भन्न चाहन्छु कि यसबाट केही प्रभाव पर्नेछ, केही सकारात्मक प्रभाव’, फिफाका अध्यक्ष इन्फान्टिनो भन्छन्, ’यो अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।’ लगभग हजार खेलमा भिएआरको परीक्षण गरिएको थियो र त्यसबाट खेलमा शुद्धताको मात्रा ९३ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत हुन पुग्यो, जुन एकदमै राम्रो हो भन्छन् फिफा अध्यक्ष । फिफाले रिभ्यु र रेफसँगको कुराकानीको गतिलाई छिटो बनाउन प्रयास गरिरहेको इन्फान्टिनोको भनाइ थियो ।
भिएआरको आलोचना किन हुने गर्छ ?
भिएआरको परीक्षण चरणहरुमा धेरै विवाद र समस्या आए । यो प्रणालीको आलोचना गर्नेहरु धेरै रहेका छन् । उनीहरु यी कारणले भिएआरको आलोचना गर्छन् । ठुला स्क्रिन नभएका स्टेडियममा रहेका दर्शकहरुलाई निर्णय रिभ्यु भइरहेको विषयमा जानकारी हुँदैन । फिफा भने दर्शकलाई सूचना दिने प्रणालीको बारेमा काम गरिरहेको बताउँछ ।
फुटबलका केही प्राकृतिक नियमहरु हुन्छन् । रिप्लेको उपलब्धताको बाबजुद, पेनाल्टीका बारेमा बहस र असहमतिहरू हुने गर्छन् । मानवीय व्याख्याका आधारमा अझै निर्णय हुन्छन् । भिएआरको प्रयोगबाट निर्णयमा पुग्न समय लाग्छ र त्यसले खेलको उत्साह घटाउँछ । भिएआरको प्रयोगले गर्दा केही खेलको पहिलो हाफमा ५ देखि ६ मिनेट अतिरिक्त समय थप गरिएको पाइएको छ ।
रिभ्युको सम्भावनाको कारणले गर्दा गोल गरेको उत्साह र आनन्द हराउँछ, जसबाट स्टेडियमको वातवरण बिग्रन सक्छ । विश्वकपमा सहभागी रेफहरुमा प्रविधिक ज्ञानको कमि रहेको छ । जसबाट निर्णय प्रक्रियामा विवाद आउन सक्छ ।
Previous नि:शुल्क आँखा परीक्षण हुने
Next एसइइमा सुधार गर
Pingback: testo the bad touch
Pingback: ne hochu vstrechatsja s devushkami
Pingback: Used Miscellaneous Test Equipment by Pearson at used-line
Pingback: over the counter smoking cessation
Pingback: песня твори добро
Pingback: ziua internaționalăaprofesorului
Pingback: зона шофара
Pingback: abba patio 55 lbs steel umbrella base with9outdo
Pingback: который час в тбилиси
Pingback: valeria tavazzi
Pingback: narushenie teploobmena